IVF Kurapa Mutengo muTurkey- Zvinokonzera uye Mitengo mune Dzimwe Nyika - Cure Kubhuka
IVF Kurapa Mutengo muTurkey- Zvinokonzera uye Mitengo mune Dzimwe Nyika
21 September 2021 21 September 2021 mushongabooking
Turkey IVF Kurapa mari
In vitro fertilization, inowanzozivikanwa seIVF, inzira inotorwa nemazai kubva mumazai, akaiswa murabhoritari (in vitro) nembeu, uye mazai anobva aiswa mudumbu kuti akure uye kukura.
Ndeipi tsananguro yekushaya mbereko?
Kushaya mbereko kunotsanangurwa sekutadza kubata pamuviri mushure megore rekuita bonde zvisina kudzivirira. Ino inguva mwedzi mitanhatu yevakadzi vanopfuura makore makumi matatu nemashanu. Munyika yanhasi, gumi nevashanu pavanhu zana vakaroora kana kuroorwa vanoda rubatsiro rwekurapa kuti vave nemwana.
Nyaya dzevakadzi dzinoverengera 40-50 muzana yekushaya mbereko. Male factor kushaya mbereko inokwana makumi mana kubva muzana kusvika makumi mashanu muzana ezviitiko zvese zvekushaya mbereko.
Muna 15-20% yemichato, kana mukadzi kana murume haana kana dambudziko.
Ndezvipi zvikonzero zvekushaya mbereko?
Ovulation matambudziko, endometriosis, uye yakakuvadzwa kana yakavharwa fallopian machubhu ndiwo akajairika zvikonzero zvekushaya mbereko muvakadzi. Yakaderera huwandu hwembeu, yakaderedzwa sperm motility, uye hapana huwandu hwembeu ndiyo yese mienzaniso yechirume chinokonzeresa kushaya mbereko.
Kutevera bvunzo dzekutanga uye kuyedzwa, vaviri vacho vanosarudza imwe yemishonga kubva ovulation induction, intrauterine insemination (IUI), kana in vitro fertilization (IVF) zvichibva pazvikonzero zvekushaya mbereko.
IVF kurapwa muTurkey inobvumidza masayendisiti kuti achinje maitiro ehukama kuti atore zvimwe zvipingamupinyi zvevakadzi mukati, senge akavharwa fallopian machubhu uye asingashande ovari, nevarume, akavhara vas deferens uye yakaderera sperm kuverenga.
MuVIVF, mazai emukadzi anotorwa obva aiswa mbeu munzvimbo yemarabhoritari nembeu yemurume, mhedzisiro yacho ichiiswa mudumbu. Sezvo wekutanga IVF mwana akazvarwa muna 1978, nzira dzekurapa IVF dzakavandudza zvikuru.
Yakawanda sei kurapwa kweIVF kunotora muTurkey?
Mutengo weVIV kurapwa muTurkey unosiyana zvichienderana neFertility Clinic. MuTurkey, mutengo weVIV kurapwa yakatangira kubva ku € 2,100 kusvika ku € 7,000.
Kwese kushanya panguva yeVIV yekurapa kutenderera inosanganiswa mune yedu IVT yekurapa package muTurkey. Taura nesu ku tora pasuru yekusangana muTurkey.
Kuongorora ovulation induction,
Zvekutora zai, general anesthesia inoshandiswa.
ICSI kugadzirira urume,
IVF (In Vitro Fertilization) kana ICSI
Embryo donation (chinja)
Kana isu tichida kuita biochemical ropa bvunzo mukati mekurapa kwako kutenderera, mutengo weIVF uchafukidzwa. Kana bvunzo dzakadai seHbAg, HCV, HIV, VDRL, mhando yeropa, hysteroscopy, uye HSG zvichidikanwa pakuongorora kwako kwekutanga, uchabhadhariswa.
Mutengo wemishonga inoshandiswa kukurudzira ovulation hauna kuiswa mumutengo wepakeji weIVF. Iyo mishonga inogona kushandiswa inosiyana zvichienderana nemurwere. Mutengo wemishonga yeIVF inotangira pa € ​​300 kusvika € 700.
IVF Therapy muTurkey Kuenzaniswa nedzimwe Nyika
Ndiani angave asiri mukwikwidzi akanaka weIVF muTurkey?
Kukodzera Kwevarume kweVIVF muTurkey
Zvinoenderana nemutemo weTurkey, kupihwa urume kwakarambidzwa zvachose pakurapa kushaya mbereko kwevanhurume.
Azoospermia: IVF kurapa hakukwanisike muvanhurume vasina urume hunowanikwa vachishandisa iyo micro-testicular sperm extraction (TESE) maitiro uye hapana kugadzirwa kwembeu pane testicular biopsy.
Kukodzera Kwevakadzi kweIVF muTurkey
MuTurkey, kupa kwezai uye kuzvitakura kwevakadzi kushaya mbereko kurambidzwa nemutemo.
Nekuda kweizvozvo, in vitro fetiraiza kurapa kwevakadzi hazviite muTurkey:
Kana paine kuenda kumwedzi,
Kana pasina kukura kwezai mushure memakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa nekuda kwekutanga kuenda kumwedzi kana kuderedzwa kweovarian reserve,
Kana maovari ese akabviswa achivhiya,
Kana chibereko chikashaikwa kubva pakuzvarwa kana kuti chakavhiyiwa chero chikonzero,
Kana rusvingo rwemukati rwechibereko rwakanyanya kuomerera uye yakakwana uterine mhango isingakwanise kuburitswa neakawanda hysteroscopic maitiro, IVF kurapa hakugoneke.
nekuti IVF kurapa muTurkey haina kudhura uye ine hukuru hwebudiriro kupfuura mune dzimwe nyika zhinji, traffic yevarwere yanga ichikura zvishoma nezvishoma. Mu2018, huwandu hwevarwere vari kutsvaga kurapa kwekubereka muTurkey kubva mhiri kwemakungwa yakawedzera neinenge 15%.
Kubudirira kweTurkey mundima yekurapa kubereka kunozivikanwa muEurope, United States, Russia, Africa, Asia, uye Middle East.
Mutengo weVIV kurapa inosiyana zvichienderana nenyika uye kiriniki. MuUnited States, kurapwa kweVIV kunodhura pakati pemadhora zviuru gumi kusvika pamadhora zviuru makumi maviri, nepo kuEurope, mari inobvira pamakumi matatu kusvika pamazana mapfumbamwe emamiriyoni.
Mari yekurapa inosarudzwawo nemhando dzakawanda dzemishonga uye marapirwo ekurapa anoshandiswa.
Munzvimbo dzakaita seUnited Kingdom, vamwe vakaroorana vakamirira makore mana kana mashanu kurapwa kweIVF. MuTurkey, hapana IVF kurapwa yakamirira runyorwa. Panguva yedu Istanbul makiriniki ekubereka, isu tinotanga kurapwa kweVIV kunoenderana nezvido zvevarwere.
Kunze kwekuchengetedzwa kwemutengo uye yakanakisa mitezo yekubudirira muIVF kurapwa, zvinokwezva zveTurkey zvinoita kuti ive imwe yenyika dzinokwezva kwazvo pasirese.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve IVF inodhura muTurkey uye uwane kotora wega.
Yakaderera-Mutengo Mu Vitro Fertilization Kurapa nePamusoro…
Zera muganho weIVF mune Nyika- Kufananidza kweZera Limit
Ndiani Anogona Kuwana IVF Kurapa muTurkey? Ndiani Anozvida?
Sei Kugadzirira IVF Kurapa muTurkey?
Ndeipi nzira yeVIVF Kurapa muTurkey?
Ndeapi Zera Muganho weVIV Kurapwa muTurkey?
← Mitemo yeIn Vitro Fertilization Kurapa muTurkey- Fertility Clinics
Nei Turkey iri Nyika Yakanakisa kuwana Mhuno Jobho? →
Tinogona kukutsvakira iwe mutengo wakanakisa kubva kumakiriniki. Kubva pazuva rekutanga kusvika zuva rekupedzisira tinogona kukutsigira nezvekurapa kwako. Ingotinyorera isu uye towana rutsigiro rwemahara kubva kwatiri. Hapana chakavanzika mutengo.
CureBooking iri pano kuzadzikisa zvaunoda nezvekurapa mazino, bvudzi kuisirwa, kuvhiya kwekuremerwa uremu, orthopedics, aesthetics uye itsvo uye chiropa chinoiswa muTurkey. Yedu network makiriniki uye zvipatara zviri muTurkey. Ivo vese vane hunyanzvi mundima yavo uye vanachiremba vane makore echiitiko. Isu ndiyo yakanakisa kambani yekurapa yekushanya muTurkey yeMazino Ekurapa, Kuisirwa Bvudzi, Kuvhiya Kwehuremu, Orthopedics, Aesthetics uye Organ Transplants.
Chinangwa chedu chikuru ndechekuunganidza vatengi pasi rese neakanakisa vanachiremba, makiriniki uye zvipatara muTurkey. Isu tinopawo mabasa ekurapa zvisinei nenguva, nzvimbo uye bhajeti.
Tinotenda kuti kuve nerusununguko rwekuvandudza hutano mune imwe nzira nenzvimbo inokodzera vatengi zvakanakisa ndizvo zvakakosha. Icho chinangwa chedu kupa zvakagadzirwa zvakagadzirwa zvehutano mapakeji muTurkey kuitira kuti vatengi vedu vagone kubatsirwa kubva pakurapwa pamwe nemubatanidzwa wezororo rekuzorora muTurkey.
CureBooking inokupa iwe yakanakisa mitengo mukurapa kwako kurapwa uko kunopihwa neakanakisa vanachiremba nemakiriniki muTurkey. Ndosaka tichikurudzira kuti iwe usasarudze usati wawana mukoti kubva kwatiri. Iwe unozogamuchira yakatsanangurwa, yakajeka uye iri nyore kunzwisisa chirongwa chekurapa mukati memazuva maviri ebhizinesi, kuti iwe uzive chaizvo zvauri kuwana pasina zvakavanzika mari.
Tinoda kukubatsira iwe mukuita sarudzo yakanakisa inogoneka nezve hutano hwako, hanya, uye zororo. Isu tinopa sevhisi yakasarudzika kuti kufamba kwako kuve nyore, kusanganisira kuendesa nendege kuenda nekubva kwaunofarira pekugara, pamwe nemuchengeti wepachivande kuenda nekubva kunzvimbo yako yekurapa.
Zvakanakira KUSANGANISIRA BONDING MUTURKEY
Ndechipi Chikonzero Chekutora Veneers muTurkey?
Ndeipi Nyika yepamusoro yeVIV Kurapwa Kunze?
Kuwana IVF Kurapwa neGender Sarudzo muTurkey- Zvinoita Here?
Ndeipi iri Budiriro Rate yeVIV Kurapa muTurkey vs USA?
Copyright © 2021 Rapa Kubhuka. All rights reserved.
yemahara quote yekurapwa